मा शून्य वर्ष हाम्रो बोली एक नयाँ अवधारणा - "परामर्श"। कुनै पनि अज्ञात घटना संग, यो चाँडै ध्यान आकर्षित गर्न र व्याख्या माग गर्न थाल्छ। "परामर्श कम्पनी", "परामर्श सेवाहरु", "लगानी र मार्केटिङ परामर्श।": हामी एक शब्द सामना गर्नु अघि, एक नम्बर पछि एक सरल layman शब्द र वाक्यांश गर्न अबोध्य देखिन्छ त्यहाँ धेरै प्रश्न, उत्तर हो - छैन। हामी आफैलाई बुझ्न छन्।
एक परामर्श कम्पनी के हो?
यो व्यापार मुद्दाहरू एक विस्तृत श्रृंखला प्रभावित, जीवन विभिन्न क्षेत्रहरू मा व्यापार परामर्श प्रदान गर्दछ संगठन हो। तिनीहरूले कानुनी, आर्थिक, कर, र मानव गतिविधि अन्य थुप्रै क्षेत्रमा सम्बन्धित हुन सक्छ।
त्यहाँ परामर्श धेरै प्रकार हो, र प्रत्येक अन्तरक्रिया एक क्षेत्र समेट्छ। र हामी तिनीहरूलाई प्रत्येक दिनेछ।
रणनीतिक र सामरिक: परामर्श क्षेत्र सधैं विकास दुई तरिकामा सुझाव। पहिलो लामो अवधिको लागि योजना मात्र समावेश, र जो आफ्नो व्यापार नीति मा संगठन समर्थन सम्वन्धि गतिविधिहरु, एक सेट छन्। दोस्रो लाइन को विकास छ ध्यानपूर्वक योजना र orchestrated कार्यहरू संग कदम चरण निर्देशनहरूको।
को परामर्श कम्पनी के गर्छ?
निर्देशन, वास्तवमा, धेरै, तर के एउटा संगठन बढ्न र विकास गर्न, जा रहेको छ यो धेरै कारक मा निर्भर गर्दछ। पहिले, तिनीहरूले सबैभन्दा अनुभव गर्यो र चयन गरिएको क्षेत्र कि समर्थक स्तरमा बुझ्न जहाँ विशेष कामदारहरूको कुनै पनि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छ। दोश्रो, यो प्रारम्भिक निर्धारण गर्न आवश्यक छ , ग्राहक आधार जसले आय को आफ्नो प्रत्यक्ष स्रोत हुनेछ त्यो थियो देखि। सफल व्यापार गर्न प्रमुख - यो नियमित ग्राहकहरु छ। स्थापित सम्पर्कबाट भविष्यमा र यसको समृद्धिको कम्पनी को सफलता निर्भर गर्दछ। यो पनि कुनै पनि व्यापार लगानी आवश्यक रूपमा आफ्नो वित्तीय सक्षमता objectively आकलन छ। त्यसपछि तपाईं विशेषज्ञता को मुद्दा गर्न जान सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, परामर्श मा आफ्नो व्यापार निर्माण गर्ने कम्पनीहरु, सूचना प्रविधि (आईटी) को क्षेत्र चयन गर्नुहोस्। एकै समयमा, विशेष गरी सान्दर्भिक वित्तीय परामर्श र व्यवस्था को क्षेत्र हो। तिनीहरूले बारी मा, कर विषय संग राम्ररी काम। यो नियम, विनियम ठूलो धेरै, यो बुझ्न धेरै गाह्रो छ, सल्लाह सबै प्रकारका बिना पनि गर्न सक्दैन, हाम्रो कानून को nuances यो कुरा विशेषज्ञ मदत समझ आवश्यक छ।
जब एक कम्पनी एक निश्चित सफलता पुग्छ, यो व्यापार को एक अतिरिक्त लाइन रूपमा उदाहरणका लागि नयाँ दिशा र चयन, मानव संसाधन परामर्श (हाल धेरै लोकप्रिय) अन्वेषण गर्न थाल्छ। आफूलाई कार्यालय र कर्मचारी चयन को क्षेत्र मा खोज्छ।
हामी व्यापार क्षेत्र छोयो एक पटक, यो वित्तीय सल्लाहकार मा विस्तृत गर्न तार्किक छ। यो परामर्श क्षेत्र, यो धेरै क्षेत्रको मुद्दाहरू समावेश हाम्रो राय, सबै भन्दा व्यापक, मा: आर्थिक, वित्तीय, प्रबंधकीय, लगानी र, पाठ्यक्रम, यो समावेश अडिट उद्देश्य।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा, शायद, सबैलाई यो परामर्श कम्पनी थाह छ। अक्सर अवधारणा एउटा परिचालन परामर्श रूपमा, व्यापार मा घटना सँग सम्बन्धित छ। यो एक विशेष स्थिति गर्न तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँछ। यो तपाईं चाँडै र constructively कुनै पनि अवस्था बाहिर तरिका फेला पार्न र सकेसम्म कुशलतापूर्वक काम प्राप्त गर्न, उदीयमान मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न अनुमति दिन्छ। वित्तीय परामर्श मात्र व्यापार मुद्दाहरू सुलझाने मा मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ, तर पनि भविष्यवाणी र सम्भव जोखिम चेतावनी गर्न, उनको घटना रोक्न आवश्यक छ।
व्यापार मा भूमिका र कार्यहरू
कस्तो परामर्श कम्पनी बारेमा स्पष्ट छ। तर के हो यसको भूमिका र कार्यमा व्यापार, let गरेको हेर्नुहोस्।
आफ्नो प्रतिस्पर्धा बलियो गर्न दृढ, कम्पनी वा निगम असफल भएमा, वा विकास नयाँ तरिका, नवीनता लागि आवश्यकता हो,: व्यापार परामर्श व्यापार संगठन सामान्यतया दुई अवस्थामा, बाहिर छ। यहाँ एकैचोटि आवश्यक समाधान विशेषज्ञ मुद्दाहरू थिचेर एक नम्बर छन्। आधार के लाइन को व्यापार भएको चयन, दृढ द्वारा आफ्नो उद्देश्य र पछि परामर्श निर्धारित चाल कि गरिनेछ प्रदर्शन।
यसको कोर, परामर्श मा - यो प्रक्रिया व्यक्तिगत हो, त्यसैले आफ्नो कार्य विशिष्ट उपचार कडाई निर्भर छ। उदीयमान मुद्दाहरू र इरादा परिणाम हासिल गर्न उचित विधि प्रयोग सम्बोधन गर्न उद्देश्य तरिका फेला - तर यो परामर्शदाता को मुख्य उद्देश्य महत्त्वपूर्ण छ।
यो कम्पनी एक संकट को घटना मा व्यापार सलाहकार को मद्दत गर्न resorted छ कि विश्वास छ, तर यो त छैन। साना र मध्यम आकारको उद्यमको आधुनिक अवस्थामा संगठन विशेषज्ञहरु को सेवाहरू प्रयोग गर्न बाध्य छन् धेरै अन्य कारण छन्। उदाहरणका लागि, जब एक कम्पनी पटक संग गति राख्न खोज्ने, तर आवश्यक परिवर्तन र नवाचारै कसरी बनाउने थाहा छैन। वा व्यवसाय छ सहयात्रा गर्न परिवर्तन छवि, गर्न स्थापना नै मा बजार मा सबै भन्दा राम्रो सम्भव तरिका पनि यो मामला गर्न सक्छन् छैन बिना हस्तक्षेप को बाहिर विशेषज्ञहरु।
परामर्श सेवा काम को तरिका को एक विस्तृत कवर जो पूर्वानुमान, रणनीतिक बीच योजना, लेखा परीक्षण, को कम्पनीको गतिविधिहरु को अनुकूलन, माग र आपूर्ति, अध्ययन मूल्यहरु र प्रतियोगिता नीतिहरूको अध्ययन, साथै विकसित कार्य योजना को phased कार्यान्वयन।
परामर्श बिना एक दिन छैन
आधुनिक मानिसको जीवन मद्दत गर्छ जो उहाँले एक विशेष समस्या सामना छ हरेक दिन, हल व्यवसायीक को परामर्श सेवा बुझ्न यस्तो छ।
व्यापार मुद्दाहरू सुलझाने को यस्तो साधन को प्रावधान मा लगे कुनै पनि कम्पनी, यसको आफ्नै उद्देश्य छ। नियम, तिनीहरूले व्यापार को सफल विकास गर्न र लामो अवधि स्थिर आय छन्।
उपयुक्त शिक्षा र तपाईंलाई रुचि क्षेत्रमा व्यापक अनुभव गर्ने राम्रो व्यवसायीक सेवाहरू परामर्श प्राप्त गर्नुहोस्।
हामी हाम्रो लेखमा तपाईं आफैलाई के परामर्श कम्पनी को लागि स्पष्ट गर्न मदत गरेको छ आशा। र तपाईं यो बाहिर दुनिया स्थिर अन्तरक्रिया मा छ र आफ्नो सबै व्यवसाय प्रश्नहरूको पूर्ण जवाफ दिन्छ जो वर्तमान सिस्टम एक शरीर, छ भनेर बुझ्न सक्षम थिए।
योजना को मुख्य प्रकार
जो अमेरिका पत्ता?
औषधि "ओमेज" gastritis संग। उपचार र परिणामहरू
पोर्क को घर सूप। आलु संग नुस्खा
कोटेज मा स्नान एक पवित्र कुरा हो